सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न आवेदन कसरी भर्ने? (भिडिओ) :: जुना श्रेष्ठ :: Setopati
कुन सवारीका लागि कति लाग्छ शुल्क?
सवारी साधन ट्र्याकिङ र सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले पाँच वर्षअघि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली सुरू गरेको थियो। जसअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना बनेको थियो। तोकिएको मिति सकिए पनि काम अझै पूरा भएको छैन।
साउन १ गतेदेखि सरकारले सबै प्रकारका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनेको थियो। तर यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार प्राविधिक समस्याका कारण काम योजनाअनुसार अघि नबढेको हो। यद्यपि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेको संख्या बढेको छ।
'हालसम्म बीस हजार सवारीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेका छन्। जसमध्ये सरकारी र निजी सवारी पर्छन्,' उनले भने, 'सार्वजनिक सवारीमा भने प्लेट वितरणको कामै सुरू भएको छैन।'
सुरक्षाको हिसाबबाहेक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेसँगै यातायात व्यवस्थापनमा एक किसिमको सिस्टम बस्ने उनको भनाइ छ।
हामीकहाँ तीन प्रकारका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हुन्छन्- सरकारी सवारीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखिएको, निजी साधनमा सेतोमा कालोले लेखिएको र सार्वजनिकमा पहेँलोमा कालोले लेखिएको।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि केन्द्रमा जानुअघि अनलाइन फारम भर्नुपर्छ। आवेदन दिनुअगाडि सवारीको सम्पूर्ण राजश्व चुक्ता भएको हुनु पर्नेछ। राजश्व चुक्ता गरेपछि विभागको वेबसाइट https://dotm.gov.np/ मा जाने। वेबसाइटको गृहपृष्ठ खुलेपछि त्यसको दायाँपट्टी विभिन्न विकल्प देख्न सकिन्छ। त्यसमध्ये दोस्रो विकल्प 'इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली' भन्नेमा जाने।
यसभित्र पनि केही विकल्प हुन्छन्।
'इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्त गर्ने तरिका' भन्ने विकल्पमार्फत नयाँ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन गर्नुपर्ने प्रक्रिया बुझ्न सकिन्छ। 'पूर्व प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमा फाराम भर्ने तरिका' भन्ने विकल्पबाट आफ्नो नयाँ सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन अनलाइनबाटै गर्न सकिने पूरा प्रक्रिया बुझ्न सकिन्छ।
यीबाहेक अन्तिममा 'अनलाइन आवेदन गर्नुहोस्' भन्ने विकल्प हुन्छ। पुराना सवारीधनीले यो विकल्पमा गएर फारम भर्नुपर्ने हुन्छ।
फारममा सम्पूर्ण विवरण भरेपछि त्यसको प्रिन्ट निकालेर तोकिएको यातायात कार्यालयमा गइ राजश्व बुझाउनुपर्छ। राजस्व बुझाउन जाँदा सवारीको कर चुक्ता सम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेट वापतको शुल्क जम्मा गरेको बैंक भौचरको सक्कल प्रति र अनलाइन आवेदन प्रणालीमा उल्लेख गरिएका आवश्यक कागजातसहित अनलाइन आवेदनको प्रिन्ट यातायात कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
यति भएपछि आवदेकको फोनमा एसएमएसमार्फत जानुपर्ने मिति र समयको जानकारी गराइन्छ। सवारी धनी आफ्नो सवारीसहित आफैं उपस्थित हुनुपर्छ।
'तोकिएको समयमा सवारी धनी आफैं उपस्थित हुन नसके उसले फेरि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ,' सवारी परीक्षण कार्यलयका केन्द्र प्रमुख मणिराम भुषालले भने।
केन्द्र प्रमुख भुषालले अनुसार साउन १ गतेदेखि तुलनात्मक रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आउनेको संख्या बढेको छ। अहिले दैनिक ६० भन्दा बढी सवारीमा जडान भइरहेको उनले बताए।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा लेखिएको हुन्छ। अगाडि र पछाडि भागमा नम्बर प्लेटसँगै सवारीमा आरएफआइडी स्टिकर टाँसिएको हुनेछ। दुई पांग्रे बाहेक सबै सवारीमा अगाडि वाइड स्क्रिन ग्लासको भित्रपट्टीबाट आरएफआइडी एन्टिना स्टिकर राखिनेछ।
मोटरसाइकलको हकमा पछाडिपट्टीको नम्बर प्लेटमा विशेष प्रकारको कभर डिजाइन गरेर चिप्स राखिएको हुनेछ। त्यसमा आरएफआइडी स्टिकरको सम्पूर्ण विवरण हुन्छ। यो स्टिकरको मद्दतमा सवारी ट्र्याकिङमा मद्दत मिल्नेछ।
यातायात विभाग महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार सरकारले देशको विभिन्न १५ नाकामा यो ट्र्याकिङका लागि आरएफआइडी गेट निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। यिनैमध्ये एउटा थानकोटमा निर्माणाधीन छ।
सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लाग्ने शुल्कः
ठूलो सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नः ३ हजार ६ सय रूपैयाँ।
मझौला सवारी तथा सानो (चार पांग्रे सवारी) मा ३ हजार २ सय रूपैयाँ।
सानो (तीन पांग्रे सवारी) मा २ हजार ९ सय रूपैयाँ।
सानो दुई पांग्रे सवारी (मोटरसाइकल तथा स्कुटर) मा २ हजार ५ सय रूपैयाँ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १४, २०७८, २३:०२:००